Fihetsika telo manoloana ny Filazantsara
"Ary raha nahare (tamin’ny apostoly Paoly) ny amin’ny fitsanganan’ny maty izy, dia nihomehy ny sasany; ary ny sasany kosa nanao hoe: Mbola hihaino anao indray izahay ny amin’izany zavatra izany… Anefa ny olona sasany niray taminy ka nino." Asan’ny Apostoly 17:32,34
Tamin’ny fandevenana olona iray malaza sy mamy hoditra teo an-tanàna, dia mpiara-monina sy namana maro no tonga naneho fiaraha-miory tamin’ilay fianakaviana nidonam-pahoriana. Samy nihaino ny hafatry ny Baiboly novakiana tamin’io fotoana io avokoa ny rehetra. Inona no vokatr’izany tao amin’ny tsirairay?
Toy ny tamin’ny andro fahiny tany Atena, dia mety nihomehy ny sasany; naleon’ny hafa kosa nangataka andro hisaintsainana izany. Antenaina fa maro no nino ny Filazantsara.
Sao ianao dia mba isan’ireo izay mandà, na mihomehy ny Filazantsara angamba, ary milaza fa tsy misy Andriamanitra? Antsoin’ny Baiboly hoe “adala” ny olona toy izany (Salamo 14:1). Dia hikiry handà ny fahasoavan’Andriamanitra ve ianao? Raha izany, dia miantefa aminao ny fanontaniana hoe: “Hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika?” (Hebreo 2:3).
Dia tsy hiraharaha ve ianao, ka hiteny hoe: «Ho hitako eo ihany izany any aoriana»? Matoky ve anefa ianao fa mbola hahazo tombon’andro hanatonana an’i Jesosy? Angamba ianao efa nahare hafatry ny Filazantsara izay nanohina anao, kanefa tsy tena nitodika tamin’Andriamanitra… Aza miandry intsony!
Ny teny nomena androany dia mifarana amin’ny hoe: “ny olona sasany … nino”. Tsy nanaiky hanaraka ny hevitry ny besinimaro izy ireo, fa sahy nanoha riana. Niaiky izy ireo fa meloka teo anatrehan’Andriamanitra, ary nandray ny famelan-keloka avy amin’Ilay hany tena Mpamonjy, dia Jesosy Kristy. “Voasoratra any an-danitra” ny anarany (Lioka 10:20).
Efa mba nanao io dingana io ve ianao?